Izinyathelo ze-Hideaway Studio kusuka e-UNC naseDowntown !! - I-Airbnb
Izinyathelo ze-Hideaway Studio kusuka e-UNC naseDowntown !!
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Bibb
Ifulethi elincane elakhelwe ngaphansi elinekhishi nendawo yokugeza yangasese enesitolo se-shower. Eduze ne-UNC-Chapel Hill futhi uhamba ngezinyawo olufushane ukuya endaweni yamahhala yokuhamba. Izivakashi zamukelekile ukwabelana ngezikhungo Esikhungweni Sesayensi Yabantu.
...I-The Hideaway Studio isendaweni engaphansi kwesakhiwo i-Vance St, ikhaya elikhulu, elihle lezitini e-Cameron-McCauley District enhle, engokomlando, eyakhiwe ngo-1926.
... Ifulethi livulekela ekamelweni lokulala, indawo yokuphumula enombhede ogcwele we-Murphy nosofa omncane. Ikhishi elincane linendawo yokuphekela, i-microwave kanye nefriji....
Indlu yokugezela enesitolo se-shower idlula nje eminyango yasepokothweni.
... Ifulethi liyingxenye yeSikhungo Sesayensi Yabantu, esiqukethe izindlu eziyisikhombisa ezinomoya oshisayo enkabeni ye-Chapel Hill. Iqhutshwa inhlangano esiza abaswele eqashiswa ngo-1981 ukukhuthaza ukuxhumana okuhlanganisiwe ekuziphatheni kanye nesayensi yomphakathi (iqhube izingqungquthela ezidumile ze-Nags Head oceanfront iminyaka engu-25), Isikhungo sinikeza izindawo zokuhlala zesikhashana nesikhathi eside kubafundi abagogodile, iminyango, namalungu omphakathi jikelele anesifiso sokuqonda umhlaba esihlala kuwo. Ibuye ixhase izinkulumo nama-seminar.
4.75 · 106 okushiwo abanye